Dhagayso Wariyaasha kale ah Cabdiqani Sh. Cabdullaahi Irbad iyo Axmed Cali Kilwe oo ku baaqay saraynta sharciga – Radio Daljir
Luulyo 4, 2016 4:29 g 0
Garowe, July, 04, 2016 – Qaar ka mid ah maamulayaasha hay’adaha warbaahinta Puntland ayaa si adag uga horyimid sharci-darrada ay Radio Daljir ku xirnayd mudada 12-ka maalmood ah, iyo sharci-darrada ay xukuumaddu ay u martay siidaaynta Radio Daljir, waxaa ay dhaliil u jeediyeen wasaaradda warfaafinta Puntland oo ay ku eedeeyeen had iyo jeer in ay abuurto khilaaf ka dhex curta xukuumadda iyo warfidiyeennada Puntland.
Wariye Cabdiqani C/llaahi Sh. Irbad oo horay u ahaa tifaftirahii guud ee PL TV oo ka md aha mas’uuliyiintii Daljir la hadlay ayaa warfidiyeennada u diray fariin ku waajahan in ay ammaankooda ilaaliyaan, waxaa uu ku dhaliilay wasaaradda warfaafinta Puntland in ay tahay wasaaradii ugu xummayd ee taariikhda soo marta Puntland, waxaana uu ku baaqay in sharciga ay warfidiyeennadu ku kalsoonaadaan.
Dhinca kale – Wariye Axmed Cali Kilwe oo ah mulkiilaha shabakada Puntlandone.com ayaa isna isagoo Daljir u waramaya waxaa uu walaac darran ka muujiyay in la caadaysto dhaqanka kutumashada Sharciga, waxaa uu sheegay in uu ku faraxsanyahay Daljir in ay xorriyadeeda hesho, balse waxaa uu walwal ka muujiyay ficillada ay xukuumaddu ku cabburinayso warbaahinta Puntland.
Hoos ka dhagayso waraysiyadii Wariye Irbad iyo Kilwe